Olee otú Download Music si iTunes Rasio Mfe
> Resource> iTunes> Olee otú Download iTunes Radio Music enweghị Ogo Loss
Apple ka ndondo kpughere ya ọhụrụ gụgharia audio ọrụ, iTunes Radio, nke bụ free ma na-akwado mgbasa gwụla ma ị denye aha na iTunes egwuregwu. Nke a na ọrụ hooks n'ime IOS, iTunes na kọmputa na Apple TV, otú gị na mkpa imelite iTunes kama wụnye ọzọ omume. Na iTunes Radio, ị nwere ike hazie gị onwe gị music ojii na ndị ọzọ ị na-eji iTunes na iTunes Radio, mfe i nwere ike inwe gị họọrọ music ọrụ.
Rịba ama na ọ bụ mgbe kwa n'oge na-eche banyere otú ibudata iTunes Radio music. Ebe ọ bụ na iTunes Radio bụ a gụgharia ọrụ, ị ga-ịnọgide na-enwe njikọ Ịntanetị ma ọ bụ a netwọk Wi-Fi. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ige ntị iTunes Radio music offline? Adịghị Ọsụsọ ya ugbu a. Ị nwere ike onwe download iTunes Radio effortlessly na-atụ aro software- gụgharia Audio teepu wee tinye n'ime gị MP3 ọkpụkpọ. Nke a na usoro na-enyere gị aka ime ụdaolu, dezie ọmụma na ndị ọzọ. Nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru ka anyị lee otú iji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
1 Wụnye iTunes Radio Downloader
Pịa n'elu Download icon iji nweta otu version dị ka gị sistemụ arụmọrụ kọmputa. Wee wụnye na ẹkedori ya.
Mbụ, pịa Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe nke usoro ihe omume. Mgbe ahụ-atụgharị na iTunes Radio iji strimụ music. Ka anya dị ka e nwere ụda na kọmputa gị, a usoro ga-amalite ibudata music site ndekọ.
Gịnị bụ ihe dị mkpa n'oge usoro bụ na ị chọrọ a ọma njikọ Ịntanetị-eme ka n'aka e nweghị ọzọ olu iche si music.
3 Play iTunes Radio music na MP3 media Player
Mgbe iTunes Radio music ebudatara, i nwere ike ịhụ ha na Library taabụ. Right-pịa songs ma họrọ Open na nchekwa. Mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ ebe songs na-nọ na kọmputa gị. Ebe ọ bụ na faịlụ ndị na MP3 format, otú ị pụrụ ozugbo itinye gị MP3 ọkpụkpọ na nyefee music aka.
Ọzọ fancy atụmatụ:
1, Dezie ọmụma.
Nke a na usoro nwere ike ịmata ihe ọmụma bụ isi banyere onye ọ bụla song. Ihe bụ ihe ọzọ, nri-pịa song na họrọ Lee Ihe ka tinye gị onwe gị okwu na nri n'igbe ahụ ga-gbapụta.
2, Mee ụdaolu.
Dị ka obi ụtọ ụdaolu na ekwentị gị? Ị pụrụ ime ka ụfọdụ nke gị ebudatara iTunes Radio music site na ịpị mgbịrịgba na akara ngosi na trimming ọ bụla so na-amasị gị na bitmap.
3, ịmepụta listi ọkpụkpọ
a na usoro na-eme ka ọ dị mfe maka ị na-egwu music na ya. Ị pụrụ ọbụna ike gị playlist ọma na were niile music i nwere.
Ọ bụ nnọọ na-akpata ọnwụnwa, nri? Ị kwesịrị ị na ibudata otu na-enye ya a-agbalị.